Fitaovana fandroana fandroana varahina vita amin'ny solika ho an'ny fandroana fatana fandroana rano 3 fantsom-bava fantsom-bokatra 2 Fitaovana zava-poana miaraka amin'ny tatatra sy famatsian-fantsom-pifangaroana fantsom-panafihana fantsom-piolahana ambony Arc
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Faucet amin'ny fandroana solika vita amin'ny solika ho an'ny fandroana fatana fandroana rano 3 fantsom-baravarana fandroana 2 Fitaovana tsinontsinona miaraka amin'ny tatatra sy famatsian-fantsom-pifangaroana fantsom-pamokarana fantsom-panafody ambony
Tendrombohitra 3-Hole Miaraka amin'ny famolavolana Centerset 4 mirefy: Tonga miaraka amina tatatra, fonon-tanana sy fonon-tànana vita amin'ny rano mafana sy mangatsiaka voamarina CUPC, fonosana feno ary mora apetraka
Classical sy mahafatifaty: menaka vita amin'ny varahina vita amin'ny menaka sy endrika marani-tsaina mamirapiratra rivo-piainana mahafinaritra izay hitondra anao hiverina amin'ny vanim-potoana feno voninahitra sy hiditra amin'ny kolontsaina tsara indrindra amin'ny fanaka varahina varahina, ny hafa dia hidera tokana
Mora ampiasaina: 360 fihodinan'ny diplaoma, famolavolana arc avo lenta, afaka mampitombo ny faritra fanadiovana, mitondra fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny fiainanao isan'andro. Faucet fandroana roa-fehin-tànana mamela anao hifehy mora foana ny mari-pana mafana sy mangatsiaka
Kalitao avo lenta amin'ny vidiny: Tongotra varahina sy fananganana miantoka faharetana sy fiankinana; Cartridge kapila vita amin'ny seramika tsy mitete. Ny spout faucet lavatory vita amin'ny aerator ABS dia afaka manampy anao hitahiry rano. (Ity aerator ity dia azo alaina mivantana amin'ny tananao mba hanadio)
SKU: 2321400RB-AMUS Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: 3 Holes, Volon-tsolika voahosotra menaka